के यो पृथ्वी विनाश हुनेछ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अब्खाज अरबी अल्बेनियन आइरिस साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काचिन काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किसोंगे कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा गा गून ग्रीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (क्युआटोनी) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्दौ पंगासिनन् पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोमाली स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
हुनेछैन। यो पृथ्वी कहिल्यै विनाश हुनेछैन, आगोले भस्म पनि हुनेछैन अथवा यसको सट्टामा अर्को पृथ्वी बन्‍नेछैन। परमेश्‍वरले मानिसहरू सधैँभरि बसून्‌ भनेर यो पृथ्वी बनाउनुभयो भनी बाइबल बताउँछ।
“धर्मात्माहरूले देश अधिकार गर्नेछन्‌, र त्यसैमा सधैंभरि रहन्छन्‌।”—भजन ३७:२९.
“त्यो कहिल्यै नडग्मगाओस्‌ भनेर [परमेश्‍वरले] पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो।”—भजन १०४:५.
“पृथ्वीचाहिं सदासर्वदै रहिरहन्छ।”—उपदेशक १:४.
“जसले पृथ्वी रच्नुभयो र बनाउनुभयो। (उहाँले त्यो स्थिर गर्नुभयो, उहाँले त्यो व्यर्थको वस्तु सृष्टि गर्नुभएन, उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनुभयो।)”—यशैया ४५:१८.
के मानिसहरूले यो पृथ्वी विनाश गर्नेछन्‌?
परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई प्रदूषण, युद्ध अथवा अरू केही कुराद्वारा यो पृथ्वी पूर्णतया विनाश गर्न दिनुहुनेछैन। बरु उहाँले “पृथ्वीका विनाशकारीहरूलाई विनाश” गर्नुहुनेछ। (प्रकाश ११:१८) उहाँले यो कुरा कसरी गर्नुहुनेछ?
परमेश्‍वरले मानव सरकारहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ किनभने तिनीहरूले यो पृथ्वीलाई जोगाउन सकेका छैनन्‌। बरु त्यसको सट्टामा उहाँले स्वर्गीय राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। (दानियल २:४४; मत्ती ६:९, १०) परमेश्‍वरको छोरा येशू ख्रीष्टले यो राज्यमाथि शासन गर्नुहुनेछ। (यशैया ९:६, ७) पृथ्वीमा हुँदा येशूले आफ्नो अद्‌भुत शक्‍तिले पृथ्वीका प्राकृतिक कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। परमेश्‍वरको राज्यको राजाको रूपमा येशूले आफ्नो शक्‍तिले यो पूरै पृथ्वी र यसमा भएका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुनेछ। उहाँले यस पृथ्वीलाई नयाँ बनाउनुहुनेछ अर्थात्‌ पृथ्वीको अवस्थालाई पहिलाको अदनको बगैँचाजस्तै बनाउनुहुनेछ।—मत्ती १९:२८; लूका २३:४३.
बाइबलले पृथ्वी आगोले भस्म हुनेछ भनेर सिकाउँदैन र?
अहँ, सिकाउँदैन। दोस्रो पत्रुस ३:७ को गलत बुझाइले गर्दा अक्सर यस्तो धारणा व्यक्‍त गरिन्छ, जहाँ यस्तो लेखिएको छ: “अहिलेको आकाश र पृथ्वीलाई आगोको निम्ति साँचिएको छ।” यी शब्दहरूको अर्थ बुझ्न दुइटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू विचार गरौँ:
१. बाइबलमा प्रयोग गरिएको “आकाश,” “पृथ्वी” र “आगो” शब्दहरूले एउटा भन्दा धेरै कुराहरूलाई बुझाउँछ। उदाहरणको लागि, उत्पत्ति ११:१ ले यसो भन्छ: “त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा थियो।” यहाँ “पृथ्वी” शब्दले मानव समाजलाई बुझाउँछ।
२. दोस्रो पत्रुस ३:७ को प्रसङ्‌गले आकाश, पृथ्वी र आगो शब्दहरूको अर्थ बुझ्न मदत गर्छ। पद ५ र ६ मा नूहको समयको संसार जलप्रलयद्वारा नाश भयो भनी बताइएको छ। त्यतिबेला मानिसहरूको विनाश भयो तर पृथ्वी भने रहिरह्‍यो। त्यसकारण जलप्रलयमा “पृथ्वी” नाश भयो भन्‍नुको अर्थ त्यतिबेलाका भ्रष्ट अनि हिंस्रक मानिसहरूको समाज नाश भयो भन्‍ने हो। (उत्पत्ति ६:११) अनि त्यतिबेलाको “आकाश” अर्थात्‌ मानव शासकहरू पनि नाश भए। त्यसकारण पृथ्वी नाश भएको थिएन बरु दुष्ट मानिसहरू नाश भएका थिए। नूह र तिनको परिवार त्यो विनाशबाट बच्न सके र जलप्रलयपछि पृथ्वीमा बसोबास गरे।—उत्पत्ति ८:१५-१८.
जलप्रलयको पानीले दुष्ट मानिसहरूको संसारलाई विनाश गरेझैँ दोस्रो पत्रुस ३:७ मा उल्लेख गरिएको “आगो”-ले यो पृथ्वीको होइन बरु दुष्ट मानिसहरूको संसारलाई विनाश गर्नेछ। परमेश्‍वरले “नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको” प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जहाँ “न्यायले बास” गर्नेछ। (२ पत्रुस ३:१३) “नयाँ पृथ्वी” अर्थात्‌ नयाँ मानव समाजलाई “नयाँ आकाश” अर्थात्‌ नयाँ सरकारले शासन गर्नेछ। नयाँ सरकार अर्थात्‌ परमेश्‍वरको राज्यले शासन गर्दा यो पृथ्वी शान्तमय प्रमोदवन हुनेछ।—प्रकाश २१:१-४.
“संसारको अन्त” हुन अगाडिका विभिन्‍न घटना वा अवस्थाबारे बाइबलमा बताइएको छ।
परमेश्‍वरको राज्यको राजा को हुनुहुन्छ अनि त्यस राज्यले अहिले के गर्दै छ र भविष्यमा के गर्नेछ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के यो पृथ्वी विनाश हुनेछ?
ijwbq लेख १४१